Nezvedu - Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co, Ltd.
Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co., LTD yakasimbiswa muna 1985, iri muBaoding City, Hebei Province, China.We tinosarudzwa muMicro Irrigation Systems, yakadai seDrip Irrigation Tape, Main Water Pipe, Micro Spray Tape, Fittings, Sprinklers nezvimwe; Izvo zvigadzirwa zvinosangana nezvinodiwa nevatengi nemhando dzakasiyana dzeakatsanangurwa.
Zvigadzirwa zvedu zvinoenderana neIO 9001: 2015 mhando uye zviyero zveinjiniya. ISO9001 certification ikambani manejimendi hwaro. Zvese zvigadzirwa zvedu zvinoshanda kumvura-yekuponesa kudiridza kwekurima, Farm, Lawn & gadheni kudiridza.
Tine yepasi rose yekutengesa network ine matavi matatu mune dzimwe nyika. Zvizhinji zvezvigadzirwa zvedu zvinoparadzirwa zvakanyanya kune nyika dzinopfuura makumi mana nematunhu.
Zvichakadaro isu tinogona kupa tekinoroji kubvunza uye sevhisi yekudonha kudiridza uye microspray yekudiridza mhinduro kune vese vatengi.
Isu tinogara tichimanikidza kusangana nezvinodiwa nevatengi uye nekuisa vatengi kubatsirwa pakutanga. Kwemakore makumi matatu apfuura, Zvigadzirwa zvedu zvakatengeswa kunzvimbo dzakasiyana dzeChina uye zvakatumirwa kune nyika dzinopfuura makumi mana nenzvimbo dzinofukidza Europe, America, Africa, Middle East neAsia.
Unogamuchirwa kutishanyira uye kutumira muvhunzo wako.
Yakagadzwa fekitori imwe yekurima firimu.
Yakaburitsa Yekutanga seti mbiri mutsetse wekudonhedza tepi muChina.
Yakagadzwa yekuyedza & yekuongorora rabhoritari uye yakatanga kupa
Yekuongorora masevhisi kune vese vatengi vanoshaya
Gadzira kambani yebazi muDubai.
Gadzira kambani yebazi muHainan, China.
Nei Isu Mingwang
Tsvagiridzo & Dhizaini timu
Iva nesainzi yekutsvagisa & dhizaini timu, yakatsaurirwa mukugadzira nekugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvevatengi pasirese.
Tora zvigadzirwa zvako zvese munzvimbo imwechete
Tinogona kuburitsa nekupa akasiyana zvigadzirwa zvekudiridzira, senge Drip Irrigation Tape, Main Water Pipe, Micro Spray Tape, Fittings, Sprinklers nezvimwe.
Gamuchira OEM & ODM odha
ichipa imwe-yekumira sevhisi kubva ku sampuro, dhizaini, kugadzirwa, kuyedzwa uye mushure mekutengesa sevhisi.
Professional kunze kwenyika mabasa
Kuwedzera kune iyo fekitori, isu takamisawo kambani yekutengesa, ichakupa mabasa ehunyanzvi ekutengesa kunze kwako.